Xillibaano ka tirsan Baarlamanka Dowladda Federaalka ah oo ku soo wajahan deeganada Puntland – Radio Daljir
Agoosto 6, 2013 7:10 b 0
Garoowe, Aug 06, 2013 ? Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay jirto qaban-qaabo iyo diyaar garaw ay wadaan xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka, kuwaasi oo qorshaynaya in ay u soo ambabaxaan deegaannada Puntland, ayna yimaadaan berri oo Talaado ah.
Waftigaan xildhibaannada ah ayaa tiro ahaan gaarayaa illaa 10 xubnood oo dhammaantood ka soo jeeda Puntland, waxaana hoggaaminaya isla markaana guddoomiye u ah xubnaha waftiga,? xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo mar Ra?isal wasaare ka soo noqday Soomaaliya gaar ahaanna dawladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Dr. Cabdiqaasim Salaad Xassan, sidaasna waxaa Radio Daljir u xaqiijiyey afhayeenka waftiga xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur ?Sanyare?
Mudanayaashaan baarlamaan ee ka socda dawladda federaalka imaanaya Puntland, ayaa ujeeddada safarkoodu waxay daarran tahay xallinta khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka, kaasoo madaxda sar sare ee Puntland ay dhawr jeer ka dhawaajiyeen, kuna hanjabeen haddii aan wax laga baddelin tabashooyinka ay? Puntland go?aan adag qaadan doonto.
Wararku waxay intaas raacinayaan ?waftiga xildhibaannada ahi sidoo kale imaatinkooda in ay qayb ka tahay arrimaha siyaasadeed ee Puntland, gaar ahaanna eedaymaha iyo kala maan-duwanaanta madaxda sar sare ee Puntland iyo siyaasiyiinta dhinaca mucaaradka.
Xildhibaannada federaalka ayaa sida la filayo tagi doona meelo badan oo gobollada Puntland ah, iyadoo dawladda ka sokaw iyana la kulmi doona issimada iyo qaybaha bulshada Puntland.
Imaatinka xildhibaannadaan ka socda dawladda federaalka ay imaanayaan Puntland ayaa ku soo beegmaysa xilli xiriirka dawladda federaalka iyo Puntland uu wajiga sii saarayay kala fogaansho xooggan, si weynna loogu kala taggan yahay ku dhaqanka dastuurka iyo qaddiyado siyaasadeed oo waaweyn, kuwaasi oo Puntland ay u aragto si gurracan oo sharciga baalmarsan in dawladdu federaalku u wajahday.